Sidee si ay u gudbiyaan iPhone SMS si PC / Mac (ay ka mid yihiin iPhone 5 / 4s)
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan iPhone SMS si PC / Mac
Sidee ayaan SMS ka iPhone wareejiyo aan laptop?
Waxaan leeyahay iPhone 4 iyo I looga badiyay oo dhan fariimaha aan BF ii soo diray, aniguna ma doonayaan in ay mar kale dhacaan. Ma waxaa jira si kastaba in aad nuqulka farriimaha qoraalka aan ka iPhone in aan laptop Sony, sidoo kale iyada oo loo marayo Lugood? Fadlan waxaan u baahan tahay caawimaad!
Haddii aad isticmaalayso Lugood si ay u maareeyaan waxyaabaha aad iPhone, waa inaad og tahay in Lugood si toos ah dib kartaa xogta aad iPhone, ay ka mid yihiin fariimaha, marka aad u hagaagsan u leh, si aad u soo celin kartaa iPhone in ay dib u helaan xogta hore haddii aad laga badiyay. In kastoo aad heli karin ama akhri file gurmad ah, oo aad u baahan tahay inay iska daayaan ka baxayso xogta ku saabsan iPhone marka aad rabto in la soo celiyo waa ka, waxa ay sidoo kale hab inay dib aad SMS iPhone. Waa hagaag, waxaa sidoo kale waa hab in aad si toos ah nuqul kartaa SMS ka iPhone in PC ama Mac. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa copier iPhone SMS.
Sidee si ay u gudbiyaan farriimo iPhone in PC / Mac
First of dhan, aad u hesho qalab wareejinta fariin iPhone: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (dadka isticmaala Windows) (macruufka 9 taageeray). Iyadoo labadan Barnaamijyada, aad nuqul karaa iPhone SMS si PC ama Mac in 2 siyaabood: si toos ah u gudbiyaan qoraalka iPhone in PC iyo nuqul aad iPhone SMS si computer ay soo saarida Lugood aad gurmad file. On Akhri oo raac habka aad rabto.
Download version maxkamad free hoose si aad nuqul fariimaha qoraalka ah iPhone in computer. Dooro version saxda ah iyo waxa ay isku dayaan in si bilaash ah!
Qaybta 1aad: Si toos ah SMS ka iPhone wareejiyo PC
Qeybta 2: Nuqul iPhone SMS si Mac ama PC ay soo saarida Lugood files gurmad
Qeybta 1: Saxiixa SMS ka iPhone in PC
Talaabada 1: Isku aad iPhone in computer
Aynu wada isku day la version Windows ah. Waxaad u isticmaali kartaa si toos ah u gudbiyaan iPhone SMS si aad u computer oo aan wax barnaamijyo kale kaaliyaha.
Waxaa Orod on your computer ka dib markii ay ku rakibidda, iyo xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka. Markaas waxaad heli doontaa suuqa kala ah sida soo socota.
Wixii iPhone 6S Plus / 6S / 6 Plus / 6 / 5S / 5 / 5C / 4s:
Wixii iPhone 4 / 3GS: waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo ka siib-in halkan.
Wixii iPhone 6 Plus / 6 / 5S / 5 / 5C / 4s , si fudud u iskaan kartaa adigoo gujinaya "Start Scan" button. Waa hagaag, u iPhone 4 / 3GS, waxaad u baahan tahay in la raaco hage ee interface ah ama ka hooseeya soo bandhigay in ay marka hore soo galaan hab iskaanka ah:
Ka dib marka aad si guul leh ku soo galaan hab iskaanka ah, Wondershare Dr.Fone ee macruufka si toos ah u bilaabi doonto aad ka baareyso iPhone xogta ku yaal.
Talaabada 3: Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo wareejiyo fariimaha iPhone in aad PC
Scan ka dib, dhammaan xogta ku saabsan iPhone, oo ay ku jiraan kuwa laga badiyay dhawaan laga heli doonaa oo soo bandhigay natiijada baaritaan. Dooro "Messages" dhinaca bidix ee suuqa, waxaad ku eegaan karo waxyaabaha faahfaahsan farriimaha qoraalka aad mid mid. Markaas calaamadee kuwa aad rabto oo guji "Ladnaansho". Waxaad badbaadin karo fariimaha aad on your computer hadda.
Wixii ku lifaaqan fariin, waxaad ku eegaan karo iyo aad u hesho doorataa "Lifaaqa Message" ikhtiyaarka ah oo ka hooseeya "Messages".
Qeybta 2: SMS Nuqul ka iPhone si Mac / PC (oo ay ku jiraan iPhone 6S Plus / 6S / 6 Plus / 6)
Haddii aadan si toos ah iskaan kartaa iPhone oo si toos ah u gudbiyaan qoraalka si aad u computer, waxaad isticmaali kartaa sidan si ay u gaaraan goolka. Dhab ahaantii, ma nooca qalabka macruufka aad isticmaalayso arrin aad, sidaas samayn kara inta aad leedahay Lugood gurmad waxaa ka mid ah.
Talaabada 1: aad u hagaagsan iPhone la Lugood
Haddii aad isticmaalayso Lugood aad u maamuli lahayd waxyaabaha iPhone, waa in aad ogtahay in Lugood si toos ah dib kartaa xogta iPhone marka aad u hagaagsan u leh, laakiin file gurmad aan la akhriyi karin ama heli. Wax macno ah ma, kaliya u hagaagsan aad iPhone la iyo barkinta ka dib markii lagu sameeyey.
Hadda ordi Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer oo waxaad heli doontaa suuqa kala muhiimsan ee hoos ku qoran (qaadashada version Windows ah tusaale ahaan). Inaad doorato "kabsado Lugood ee kaabta File" dusheeda, oo gurmad ah ee aad iPhone halkaan ku qoran doonaa. Waxaa Dooro oo guji "Start Scan" si ay u soo saaro wixii faahfaahin ah.
Talaabada 3: Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh oo nuqul ka farriimaha iPhone si aad u computer
Scan ka dib, waxaad ku eegaan dhammaan waxyaabaha aad Lugood gurmad file, ay ka mid yihiin fariimaha, iMessages, xiriirada, iwm Markaas calaamadee "Messages" ama "Lifaaq Message" doorasho dhanka bidix oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer . Hadda waxaad ku eegaan kartaa fariimaha aad ee HTML ku haboon.